I-Alumina Tube Ceramic ne-Mo / Mn Metallization China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Tube ye-Ceramic > I-Alumina Tube Ceramic ne-Mo / Mn Metallization
Alumin i-Ceramic Tube ne-Mo / Mn Metallization
Ngenxa yesikhuni se-ceramic ne-Mo / Mn metallization ingabhalwa ngezingxenye zensimbi ngokuqondile, ngezinye izikhathi, amakhasimende ambalwa nje acela i-alumina tube tube ukuba ibe yi-Mo / Mn ensimbi. Le tube yensimbi ye-ceramic yenziwe ngamaphesenti angama-95 e-alumina ngokucindezela okumile, umjovo, noma ukucindezela okushisayo. Ukukhethwa kwengubo yomzimba we-ceramic kuyatholakala, i-plating ejwayelekile iyinhlangano ye-nickle plating, i-silver plating, i-golden plating, i-tin plating, i-copper plating.
Siyakwazi ukuhlinzeka nge-tube ensimbi ye-ceramic ekhonjiwe ngokucophelela ngezinhlobo ezihlukahlukene zokugaya, ukuchithwa kwe-CNC, izinqubo zokusika. Ukubekezelelana okungcono kakhulu kungaba +/- 0.001 ngobude, +/- 0.01 ububanzi obungaphakathi nangaphandle .
1. I- ceramic enkulu + Mo / Mn metallization 2. I- ceramic ephezulu + Mo / Mn metallization + I-nickle plating
Ukuvikelwa ekukhiqizeni okuningi kuyinzuzo kithi ngenxa yendlela yethu yokukhiqiza ephelele.
● Ukuphikisana nokuqothula ngaphandle kokugqwala
● Min. ukumelana kagesi kanye nokuqina kwe-vacuum
Isayizi enkulu ye-alumina seal ceramic seal
I-Alumina Tube ne-Mo / Mn Metallization